तपाइलाइ कस्ता भिडियो मन पर्छन? – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
तपाइलाइ कस्ता भिडियो मन पर्छन?
यो पोष्टको शिर्षक हालै मैले ट्विटरमा पोष्ट गरेको एक पोलको हो बिषय हो। मैले भिडियो ब्लगिंग गर्छु भनेर भिडियो बनाउँदै आएको भए पनि अहिलेसम्म मेरा भिडियोका दर्शकलाइ उनिहरुको चहाना कस्तो छ भनेर सोधेको थिइन । यो पोल को निर्धारित समय सकिन अझै केहि समय बाँकि भए पनि अन्तिम नतिजा सजिलै अनुमान लगाउन सकिने भएको छ । र, नतिजा मैले बनाउने गरेका भिडियोको ठ्याक्कै उल्टो आएको छ ।
ट्विटरका मेरा फलोअरहरु बढिमात्रामा समसामयिक बिषय र हल्का फुल्का मनोरन्जनको बिषयमा भिडियो बनोस भन्ने चहानु हुने रहेछ । तर मेरो चाखको बिषय भने नेपालि फिल्म र नेपालि कलाकारहरु हुन । यस हिसाबले मैले बनाउने भिडियो त्यति चाखलाग्दा छैनन । अब मैले के गर्नु पर्ला?
(यो पोलमा अबको ८ घण्टामा भएको परिवर्तन अन्तिममा अपडेट गरिनेछ )
के मैले मेरा भिडियोको बिषय परिवर्तन गर्नु पर्ला ?
मेरो बिचारमा भिडियो ब्लगिंग आफुलाइ मन लागेका र मन परेका बिषयमा चर्चा गर्ने माध्यम हो । आफुले जानेका र मन खाएका कुरामा चर्चा गर्दा खुल्न सकिन्छ र प्रस्तुत बिषयलाइ न्याय गर्न पनि सकिन्छ । चाख नलाग्ने बिषयमा चर्चा गर्न जांगर पनि चल्दैन र बोझ जस्तो अनुभव हुन सक्छ । तेसैले, मैले मेरा चाखलाग्दा बिषयमा भिडियो बनाउँदै जानु नै उपयुक्त होला जस्तो लागेको छ । तेसैले फिल्मको बारेमा र कलाकारहरुको बारेमा चर्चा गर्न रोकिने छैनन।
तर, पोलमा भोट गर्ने जस्तै धेरै नेपालिलाइ समसामयिक बिषय र हल्का फुल्का मनोरन्जनमा रुचि हुन्छ । ति बिषयमा पनि भिडियो बनाउँन सके दर्शकहरुलाइ मनोरन्जन प्रदान गरेर समाजसेवा गर्न सकिन्छ । मलाइ यि बिषय मनै नपर्ने पनि होइनन। तेसैले, प्रयोग गर्दैमा केहि बिग्रंदैन होला जस्तो लागेको छ ।
मेरो अनुभवमा धेरै बिषयमा हात हाल्दा कतै को पनि भइदैन। तेसैले, अहिलेलाइ हप्ताको एक दिन हल्का फुल्का मनोरन्जनको लागि छुट्याउने बिचार गरेको छु – “फन फ्राइडे” ।
अब फन फ्राइडेमा के कस्ता भिडियो हुन्छन भन्ने बिषयमा कामले नै बोलोस, यहि शुक्रवार !
कुरा पछि गरौंला!
समसामयिक बिषय भन्नाले यो भिडियो पनि पर्ला :
(यो पोल, मैले कस्ता भिडियो बनाउदा उचित होला भनेर बुझ्न बनाइएको हो )
— Anand Nepal (@AnandNepal) May 11, 2016
तर यो संगै सबै भन्दा बढि भोट आएको “समसामयिक बिषय”मा बनेको भिडियो “नक्कलि सर्टिफिकेट वाला प्राबिधिक”को बारेमा बनाएको भिडियोले भने दर्शक पाएको रहेनछ । बरु सबै भन्दा कम भोट पाएका फिल्म सम्बन्धि र कलाकार सम्बन्धि भिडियो नै मैले बनाउन उचित तलको तथ्यांकले देखाउँछ ।
This entry was posted in Information and tagged video. Bookmark the permalink.
← आमा, नक्कलि सर्टिफिकेट, नक्कलि नाम, अर्चनाका फिल्म जिस्म र छेस्को (हप्तालाइ फर्केर हेर्दा)
साताका फिल्म, साताका भिडियो, अमरपंक्षि, आना शर्मा, अर्चना पनेरु लफडा (साताहेर्ने शुक्रवार) →